PCB -ga adag
PCB -yada debecsan & adag
Joogtaynta Sare PCB
PCG -ga TG ee Sare
PCB -ga Birta
Dhumucda Cooper PCB
Semiconductors (IC -yada)
Taageerayaal kale oo badan
Qiimaynta PCB (PCBA)
Daabacaadda Dhejinta Alxan
Dib -u -celi Alxanka
DIP (iyada oo loo marayo kulanka godka)
Alaabta la dhammeeyay (dhisidda sanduuqa PCBA)
Sanduuqa PCBA + METAL
Guddiyada Wireless -ka
Naqshadda Elektaroonigga (Qaab -dhismeedka & Qaab -dhismeedka PCB)
Codaynta Firmware -ka
Prototyping & Shahaadooyinka Alaabta
NDA & Ilaalinta Xuquuqda Qoraalka
Loojistikada Dhammeystiray Adduunka oo dhan
Calaamadda Ganacsiga & Diiwaangelinta Patent -ka Shiinaha
Fiidiyow ku saabsan Fumax
Xaaladaha iyo shuruudaha kaydinta PCBA ee heerar kala duwan
Habka wax -soo -saarka PCBA wuxuu u baahan yahay inuu maro dhowr marxaladood oo kaydinta. Marka farsamaynta balastarka SMT la dhammaystiro oo loo wareejiyo farsameynta gelinta gelinta, badiyaa waxay u baahan tahay in la kaydiyo waqti cayiman ka hor intaan la gelin. Ka dib markii imtixaanka guddiga PCBA iyo shirka alaabta la dhammeeyey, waxaa jira marar badan ...
Xalka Golaha PCB ee Ugu Fiican Fiican
Shirkii PCB-ga ee fiicnaa micnaheedu waa isu-keenidda PCB-yada halkaas oo masaafada u dhexaysa badhtamaha u dhexaysa suufka SMD ee ku dhow iyo kubbadaha iibiya (biinanka BGA, musmaarrada IC, biinanka isku xira…) aad bay u yar yihiin. Si kale haddii loo dhigo, qeybaha ayaa isku dhow sabuuradda wareegga daabacan, iyo xawaaraha sare iyo func ...
Dhibaatooyin kala duwan ayaa lagala kulmay geedi socodka naqshadeynta PCB -ga iyo soo -saaristiisa
Geedi socodka naqshadeynta PCB -ga iyo wax -soo -saarkiisa, waxaa had iyo jeer jira dhibaatooyin kala duwan, sida noqoshada midabka mugdiga ah, xiriirada granular ee PCB, iyo foorarka foorarka, iwm. suufka oo aan ku jirin hogaanka qaybta. Xaaladdan, waxaa jira ...
Sida loo naqshadeeyo PCB-yada Joogtada ah?
Sida loo naqshadeeyo PCB-yada aadka u badan? Marka hore, aan fahamno caqabadda ugu weyn - waddo -marinta. Ka sokow dariiqa dhaadheer, ka taxaddar fiilooyinka fiilooyinka PCB. Qulqulka dibadda ee signalada lama soo dhaweeyo maxaa yeelay waxay yarayneysaa tayada signalada waxayna khalkhal u keentaa calaamadaha kale. Ku ...
Waa maxay faa'iidooyinka shaybaarka PCBA ee wax -soo -saarka ballaaran ee mustaqbalka?
Waa wax caadi ah in shirkaduhu la kulmaan amarada degdegga ah ee soo -saaraha OEM -ka elektiroonigga ah iyo warshadaha wax -soo -saarka, mid ka mid ah faa'iidooyinka caddaynta PCBA waa in la hagaajiyo wax -soo -saarka iyo wax -soo -saarka iyo xawaaraha wax -soo -saarka. Hadday tahay soo -saarista iyo geedi -socodka tiknoolajiyadda PCBA ee qaab ka baxsan ...
Waa maxay Silkscreen on PCB?
Silkscreen -ka saaran PCB -ga waa raad -raacka ugu horreeya ee u shaqeeya tilmaame tixraac ah si loogu meeleeyo qaybaha meelaha ku habboon Guddiga Wareegga Daabacan (PCB). Silkscreen PCB PC -ga Silkscreen wuxuu ujeedkiisu yahay inuu kaa caawiyo inaad kala soocdo qaybaha PCB, dhibcaha imtixaanka, calaamadaha digniinta, iyo kuwa kale ...
Soo koobidda sababaha ugu waaweyn iyo falanqaynta xalalka suurtagalka ah inta lagu guda jiro geeddi -socodka SMT
Geedi socodka iyo wax soosaarka SMT, way adag tahay in laga fogaado dhibaatada tuurista mashiinka chip SMT. Tuurista maaddadu waxay ka dhigan tahay in fuuliyuhu uusan ku dhegganayn ka dib markii uu nuugo maaddada geedi -socodka wax -soo -saarka, laakiin wuxuu ku tuuraa alaabta sanduuqa tuurista maaddada. ama waxyaabo kale ...
Waa maxay Soo -saarista Qandaraaska Elektaroonigga ah
Soo saarista qandaraaska elektiroonigga ah (ECM), oo sidoo kale loo yaqaan EMS (adeegga waxsoosaarka elektiroonigga ah), macnaheedu waa in OEMs (soosaarayaasha qalabka asalka ah) ay wax soo saarka korontada u dhiibaan soo saarayaasha EMS. Waxay noqon kartaa xal hal-joog ah, oo ay ku jiraan naqshadaynta korontada, qaabeynta PCB, su ...
Saamaynta wanaagsan ee guddiga wareegga FPC ee dabacsan
Warshadaha casriga ah, sida aan ognahay in ay jiraan dhowr nooc oo PCB ah, oo mid walba leeyahay faa'iidooyin u gaar ah. FPC (guddiga wareegga dabacsan) waa mid ka mid ah looxyada wareegga ee ugu caansan oo qaybaha kala duwan ee dalabka waxaa ku jira elektiroonigga macaamiisha, isgaarsiinta, elektiroonigga baabuurta iyo wixii la mid ah ....
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u naqshadeyso oo aad u dhisto Muujinta LCD -ga Qeyb -qaas ah
Qeybta Caadiga ah ee Naqshadeynta LCD waxay soo bandhigtaa Muujiyayaasha Crystal Liquid ama inta badan loo yaqaan LCD -yada waa mid ka mid ah qaybaha elektiroonigga ah ee ugu badan oo naga caawiya inaan dhexgalno qalab ama aalad. Inta badan qalabka la qaadan karo ee shaqsiyeed iyo xitaa ...
Sida loo dayactiro PCBA -ga warshadda wax -qabadka ee SMT
Inta lagu jiro soo saarista iyo adeegsiga farsamaynta balastarka SMT, waxaa jiri doona shaqo aan caadi ahayn ama xitaa si xun u isticmaalka badeecada oo dhan sababtuna tahay dhibaatooyin ka jira geedi -socodka wax -soo -saarka PCBA oo dhan iyo habka adeegsiga, oo ay ku jiraan khaladaad ka -shaqaynta, isticmaalka aan habboonayn, gabowga qaybaha iyo arrimo kale. Tani waxay u baahan tahay waxoogaa ...
Waa maxay PCB Joogtaynta?
PCB-ga aadka u badan waa PCB-da anteenada oo soo saarta, qiimaysa, soo saarta, oo heshaa calaamadaha raadiyaha ee ka badan 1GHz. Si aad si fiican u fahanto waxa PCB-ga aad u badan yahay, waa inaad taqaan qaab-dhismeedkiisa aasaasiga ah. PCB-ga ugu badan ee aasaasiga ah wuxuu leeyahay 4 lakab wuxuuna ka kooban yahay nidaamka RF iyo t ...